Olee otú foogu | Netwọk Mgbasa Ozi
Olee otú foogu na-etolite
Otu n’ime ihe gbasara mbara igwe siri ike ịkọ obi abụọ adịghị ya bụ igwe ojii ahụ. Ọ bụ ihe ọzọ karịa nhazi nke igwe ojii buru ibu na ọkwa ala yana a 100% iru mmiri. Ọ na-abụkarị ọtụtụ oge n'ọtụtụ mpaghara nke mba na ọnwa nke ọ na-egosipụtakarị onwe ya ugboro ugboro. ọ bụ Disemba na Jenụwarị. Ọzọ m ga-agwa gị ntakịrị ihe banyere ihe omimi a dị egwu ma dị egwu.
Fog na-eme n'ọnọdụ nke nkwụsi ike zuru oke, n’enweghi ikuku obula yana ọnụnọ nke anticyclone. Agụụ enweghị ike itolite site na squall. Ihe omume a bidoro mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị ala karịa ihe nkpuchi di ala kari ndi di elu, nke ahụ bụ, mgbe oyi na-atụ n'isi obodo karịa ugwu ma ọ bụ n'ugwu.
Dabere na data nke AEMET jikwaa, obodo nwere ọtụtụ ụbọchị ikuku na afọ ọ bụla ValladolidZaragoza na Salamanca na-agbaso. Agbanyeghị, enwere mpaghara nke agwaetiti Tenerife, nke ị nwere ike ịdebanye aha nkezi nke ụbọchị 60 n’afọ na foogu anoghi n'ulo oba.
Alụlụụ bụ kpam kpam adịghị emerụ ahụ ike, n'agbanyeghị ihe ọtụtụ mmadụ nwere ike iche. N’ụbọchị mgbe ikuku dị, ebe ikuku na-adịghị n’ikuku, mmetọ a karịrị nke ụbọchị nkịtị, agbanyeghị foogu adịghị njọ n’ahụ. Ikuku a ga-eku ume n'ime ala ikuku bụ otu ihe na ihe omume a emeghị, ihe dị iche bụ na a elu ịta mmiri vepo.
Enwere m olile anya na emeela m ka ọtụtụ n'ime obi abụọ gị doo anya banyere ihe a na-ahụkarị gbasara ihu igwe n’oge oyi nke ahụ na-emekwa ka visibiliti na-esiri ndị ọkwọ ụgbọala ike, bụrụ ezigbo ihe egwu maka ịnya ụgbọ ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Olee otú foogu na-etolite
Kedu ihe bụ oke ikuku mmiri na otu esi akpụ ya?